ပါစပ်တီးလုံးအတွက်အမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ယခုနှစ် 2012 ဘာလင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်ဘာပျေါတှငျ5အကောင်းဆုံးပါစပ်တီးလုံး၏တစ်ဦးကဂျူရီတစ်ဦးဘူဂေးရီးယားမိန်းကလေးနှင့်ပြင်သစ်မိန်းကလေးတို့အကြားစစ်တိုက်ခြင်းငှါစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ အခန်းထဲမှာလူတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးကစားသမားထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြားဖူးအသံငယ်ရွယ်မိန်းကလေးများသည်နှုတ်ကျက်လာမယ့်နေကြသည်။7မိနစ်ပြီးနောက်သဘာဝအသံများကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်နောင်လာမည့်လေးနှစ်ကမ္ဘာတွင်ပါစပ်တီးလုံးချန်ပီယံပိုကောင်း Pe4enkata အဖြစ်လူသိများ Adriana Nikolova, ပါ!
Pe4enkata ဘူလ်ဂေးရီးယားမှခေါင်းစဉ်ဆောင်တတ်၏, ဒါပေမယ့်သူမကြောင့်ပွိုင့်မှာကိုရပ်တန့်မထားဘူး။ သူမသည်အော်ပရာသီချင်းဆိုလေ့လာရန်နှင့်ပါစပ်တီးလုံးနှင့်အတူအော်ပရာရောထွေးနေဆဲဖြစ်သည်။ သူမသည်ဂီတ၏ဤမျိုးအတွက်အောင်မြင်ဖို့ငယ်ရွယ်ခွက်ကူညီပေးသည်နှင့်ပါစပ်တီးလုံးဇာတ်စင်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
အမျိုးသမီးအချိုးမှအထီး beatboxing ခုနှစ်တွင်ယောက်ျား၏မျက်နှာသာအတွက်အကြီးအကျယ်ကြတယ်။ အထီးများနှင့်အမျိုးသမီးစကားသံကိုကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ?
အစဉ်မပြတ်ငါဘာလင်ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံမှာအနားမှာ 2012 အတွက်ယောက်ျားနှင့်အတူဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပါတယ်ကတည်းကကျနော်တို့အနုပညာကို "လူသားရဲ့အားကစား" စဉ်းစားသည်တစ်ဖွဲ့လုံးအဖြစ် မှလွဲ. , အမျိုးသမီးများဘာမှအတွက်ယောက်ျားယုတ်ညံ့မဟုတ်ထင်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အထူးသဖြင့်ငါ၏အနှစ်အရွယ်တွင်မိန်းကလေးငယ်များ, များစွာသောအခြားသောအရာတို့ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်ကိုငါသိ၏။ ငါပါစပ်တီးလုံးသင်တန်း 10 နာရီတစ်ရက်သုံးစွဲတဲ့သူအခြားမိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးဘူး ...
© Adriana Nikolova ပါစပ်တီးလုံး
ပါစပ်တီးလုံးမှတပါး, သငျသညျ, စန္ဒရား play ဂစ်တာ, သီခငျြးဆို, ဂီတသီအိုရီများနှင့်သဟဇာတသင်ယူဖို့သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖွဲ့လုံးနှင့်အမျှကျနော်တို့ဘောင်၌သူတို့ကို setting မဟုတ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောငျးသားမြား၏ဖန်တီးမှုစဉ်းစားတွေးခေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားကြသည်။ ကျနော်တို့ဖျော်ဖြေပွဲတွေအများကြီးစည်းရုံးနှင့်မူရင်းထုတ်လုပ်မှုမှာရည်ရွယ်ပါသည်။
ငါပြီးသားလည်းတစ်ဦးပါစပ်တီးလုံးဖြစ်ချင်တယ်။ အဘယ်အရာကိုအရည်အသွေးတွေကိုငါမလိုအပ်ပါဘူးငါဘယ်မှာ start ရကြမည်လော
ကျနော်တို့ Skiller နှင့်အတူပြက်လုံးလိုအဖြစ်ပါစပ်တီးလုံးဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်, သင်ပိုမိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုအဖြစ်ပါစပ်တီးလုံးများ, စည်းချက်အလုပ်ကြိုးစားသူနှင့်သင်တန်းဖွစျရမညျ။
ကျိန်းသေကျနော်တို့ကစီးပွားဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်, ဒါပေမယ့်ပါစပ်တီးလုံးကိုယ်တိုင်က "မြေအောက်" စဉ်းစားသည်ကတည်းကငါကဒီကောင်းသောအရာကိုအတိုင်းအတာအထိမသိရပါဘူး။
သင်ဘယ်လိုပါစပ်တီးလုံးနှင့်အတူအော်ပရာသီချင်းဆိုပေါင်းစပ်သလဲ? ဒီတစ်ခါလည်းဒီလူငယ်တွေဟာမတ်ေတာရှိသောအော်ပရာစတင်ရန်များအတွက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် ...
ဤသည်ကိုအတိအကျငါ၏အရည်မှန်းချက်ပါ! အကြိမ်ပေါင်းများစွာငါဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ကိုငါ့ကလေးဘဝထဲကဖွပေးပြီ။ ငါ Bizet ရဲ့အော်ပရာ "ကာမဲန်" တွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ယူ. ငါသည်ထိုသူတို့ကိုကနားထောင်ဖို့လာရန်အဘို့အကျွန်ုပ်အခမဲ့လက်မှတ်များစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်ငါ့မိတ်ဆွေတွေကိုကပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှု tragicomic ခဲ့: "အော်ပရာ? မင်းရူးနေလား? ငါ့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်ခဲ့သောဤအဖြစ်အပျက်တက်ရောက်ရန်သူတို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့စီမံ ... စင်မြင့်ပေါ်အော်ဟစ်တစ်စုံတစ်ဦးက "ဒါပေမဲ့ - ဒီဒါရယ်စရာပါပဲ။ စွမ်းဆောင်ရည်၏အဆုံးပြီးနောက်သူတို့ငါ့ဆီသို့ရောက် လာ. နှင့် said: ငါကအော်ပရာအနုပညာတစ်ခုလုံးအဖြစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်လမ်းဥပမာတစ်ခုအဖြစ်လုံလောက်အောင်ကောင်းလှ၏ထင် "သင်တို့ရှေ့မှကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသည်ကြပြီမဟုတ်အဘယ်ကြောင့် Wow သောတော်တော်လေးအေးခဲ့တာလဲ" ။ ကျနော်တို့ကအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပင်လျှင်, ကြိုတင်မဲအတွက်အရာအားလုံးအကြောင်းကိုအနုတ်လက္ခဏာထင်မြင်ချက်ဖော်ပြ၏အလေ့အထ၌ရှိကြ၏ ...
Pe4enkata နှင့် Vesko Eshkenasi
Facebook အမှာ Pe4enkata
Youtube ကိုမှာ Pe4enkata
Instagram ကိုမှာ Pe4enkata
ပါစပ်တီးလုံး, တံခွန်စိုက်သူ, တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံပြင်များ, ဂီတ, redbull | | rating:5/ 30